Tiketi CFL Traingbọ ala na Ahịa Mgbakọ | Chekwa ụgbọ oloko
Tiketi CFL Traingbọ ala na Ahịa Mgbakọ
Ụlọ > Tiketi CFL Traingbọ ala na Ahịa Mgbakọ
You nwere ike ịchọta ozi niile gbasara Cheap CFL ụgbọ okporo ígwè na Ọnụahịa njem CFL na uru.
isiokwu: 1. CFL site na Isi Ihe Zụọnụ
2. Banyere CFL 3. Top Insights Inweta Cheap CFL Train Ticket
4. Ego ole ka tiketi CFL na-efu 5. Rozọ Njem: Gịnị mere o ji dị mma iji ụgbọ oloko CFL, gharakwa njem ụgbọelu
6. Kedu ihe dị iche n'etiti obere oge, na Day Tiketi na CFL 7. Enwere ndenye aha CFL?
8. Ogologo oge ole tupu CFL ahapụ m kwesịrị ịbịa 9. Gịnị bụ usoro ụgbọ oloko CFL
10. Kedu ọdụ ndị CFL na-eje ozi 11. CFL Ajụjụ
CFL site na Isi Ihe Zụọnụ
Na oke usoro akara aka nke 96%, NKWO (Officiallọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè Luxembourg) bụ otu n’ime ndị na-ahụ maka ndị na-anya ụgbọ okporo ígwè na Europe.
Kwa afọ, CFL na-ewe 25 nde mmadụ na 105 nde tọn ngwongwo gafere ebe ha na-aga n'ime Luxembourg na gafee Europe.
CFL dị ezigbo mma na gburugburu ebe obibi, Free CO2, na 100% A na - enweta ike eletrik ha niile na - enweta ike.
CFL bụ onye na-enye ọrụ kacha agagharị Luxembourg.
NKWO, National Society nke Luxembourg Railways, bụ aha ọzọ maka Luxembourg National Railways. Ebe ọ bụ na e guzobere ya 1946, CFL enyela ụmụ amaala Luxembourg ọrụ ngagharị.
CFL na-enye ọrụ ụgbọ okporo ígwè n'ime Luxembourg na gafere Europe. Na tiketi ziri ezi, ị nwere ike ịga niile kachasị mma ebe ezumike na Europe. Categoriesdị tiketi dị iche iche, CFL na-egbo mkpa onye ọ bụla.
CFL ụgbọ oloko Ugboro okporo ígwè e, Luxembourg – Brussels, Luxembourg – Paris, Ettelbruck – Liège, Wasserbillig - Dusseldorf. Nwere ike nweta mba ndị agbata obi n'ime Europe na iji CFL ụgbọ oloko: France, Germany, na Belgium.
Gburugburu ụlọ ọrụ ahụ, 3,090 ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè iji hụ na ụfọdụ nde ndị njem ruru ebe ha na-aga kwa ụbọchị n'enweghị nsogbu.
gaa Chekwaa Homepage Train ma ọ bụ jiri wijetị a chọọ ụgbọ oloko tiketi maka CFL:
Top Insights Inweta Cheap CFL Train Ticket
Nọmba 1: Akwụkwọ gị CFL tiketi n'ọdịnihu dị ka i nwere ike
Pricegwọ nke CFL gbaa ụgbọ okporo ígwè na-ebili ka ụbọchị njem na-abịarukwu nso. Nwere ike ịzọpụta ego site na ịdenye gị tiketi ụgbọ oloko CFL dị ka o kwere mee site na ụbọchị ịpụ (Nọmalị 3 ọnwa ndị dị n'ihu bụ nke kachasị). Ntinye akwụkwọ n'oge na-eme ka o doo anya na ị ga-enweta tiketi ụgbọ oloko CFL dị ọnụ ala. Onu ha na onu ogugu, ya mere ngwa ngwa ị nyere iwu, dị ọnụ ala karịa maka gị. Iji zọpụta ego na CFL gbaa ụgbọ okporo ígwè, zụta tiketi gị n'isi.
Nọmba 2: Njem site CFL n'oge oge kachasị elu
Dị ka ọ bụla onye ọrụ ụgbọ okporo ígwè, CFL gbaa ụgbọ okporo ígwè na- dị ọnụ ala karịa n'oge oge kachasị elu, na mmalite nke izu, ye ke uwemeyo. Can nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè n'ime izu. Na tusde, Wenezde, na Tọzdee, CFL gbaa ụgbọ okporo ígwè ndị kasị echekwa. N'ihi na olu nke azụmahịa njem na-aga ọrụ n’ụtụtụ na anyasị, gbaa ụgbọ okporo ígwè na-eri ihe na ọtụtụ ndị oge. Ọ dị ọnụ ala karịa ịga njem n'oge ọ bụla n'etiti ụtụtụ na anyasị. Oge ngwụsị izu bụ oge ọzọ kachasị elu maka ụgbọ oloko, tumadi na Fraịdee na Satọde. Ọnụ ego ụgbọ oloko CFL na-arịkwa elu ezumike ọha na eze na ezumike ụlọ akwụkwọ, na ezumike ụlọ akwụkwọ na Europe nwere ike ịdịru 3 izu ọ bụla.
Nọmba 3: Nye tiketi gị maka CFL mgbe ị ji n'aka usoro njem gị
Fgbọ oloko CFL na-achọsi ike, ya na obere asọmpi, ha ugbu a-anọgide n'elu nhọrọ maka ụgbọ oloko na Luxembourg. Ha nwere ike ịtọ ntọala mgbochi ụgbọ oloko dịka nke ha nwere nke na-egbochi mgbanwe tiketi ma ọ bụ nkwụghachi belụsọ ma ọ bụ ụdị azụmaahịa ụgbọ okporo ígwè.. Ọ bụ ezie na a ka nwere ebe nrụọrụ weebụ ị nwere ike ire ndị mmadụ aka gị tiketi, CFL anaghị ekwe ka ere ahịa tiketi nke abụọ. Kedu otu esi enyere gị aka ịchekwa ego? Nye akara tiketi gị mgbe ị ji n'aka na oge gị ga-azọpụta gị site na ịdenye otu tiketi ugboro abụọ n'ihi na ihe bịara ma ị nweghị ike iji tiketi azụtara nke mbụ.
Nọmba 4: Zụta gị CFL tiketi na Save A Train
Chekwaa Tragbọ oloko nwere nke kasịnụ, nke kacha mma, na nkwekọrịta dị ọnụ ala maka tiketi ụgbọ oloko na Europe. Ezigbo mmekọrịta anyị na ọtụtụ ndị na-arụ ụgbọ okporo ígwè, nke bụ isi iyi ụgbọ oloko, na ihe omuma anyi banyere teknụzụ algorithms metụtara, -enye anyị ohere ka dị ọnụ ala ụgbọ okporo ígwè tiketi amụọ. Anyị na-adịghị nnọọ na-enye ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè amụọ maka CFL naanị; anyị na-enye otu ihe ahụ maka ihe ndị ọzọ na CFL.
Ego ole ka tiketi CFL na-efu?
njem ọha na eze n'ime Grand Douchy nke Luxembourg bụ mgbe ụfọdụ n'efu na mgbe ụfọdụ ọ bụghị, dabere na ụzọ ahụ ma ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala. Otú ọ dị, 1klas st na ụgbọ oloko CFL, na-efu ego mgbe niile, ma ha abụghịkwa nhọrọ dị oke ọnụ. CFL gbaa ụgbọ oloko na-amalite site € 3 ruo € 6 maka otu njem ụgbọ oloko. Nke ọnụahịa nke tiketi ụgbọ oloko CFL dabere na ụdị tiketi ịzụrụ na mgbe ịchọrọ ịga njem:
Obere oge . 3
Rozọ Njem: Gịnị mere o ji dị mma iji ụgbọ oloko CFL, gharakwa njem ụgbọelu
1) Na-abata mgbe niile na City Center. Nke a bụ otu uru nke ụgbọ oloko CFL ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu. CFL ụgbọ oloko na niile ụgbọ okporo ígwè ndị ọzọ site na ebe obula n’ime obodo ruo n’etiti obodo ozo. Ọ na-azọpụta gị oge na ọnụ ahịa nke cab si ọdụ ụgbọ elu na etiti obodo. Na ụgbọ oloko na-akwụsị, ọ dị mfe ịnweta ebe ọ bụla n'obodo ị na-aga. Ọ baghị uru ebe ị na-esi, Brussels, Nancy, Paris, ma ọ bụ Amsterdam, etiti obodo na-akwụsị bụ isi uru nke ụgbọ oloko CFL! Ọmụmaatụ, Ọdụ ụgbọ elu Luxembourg bụ 20 Nkeji dịpụrụ adịpụ site na etiti obodo.
2) Iji ụgbọ elu na-eme njem chọrọ ka ị nọrọ ọdụ ụgbọ elu opekata mpe 2 awa tupu oge ụgbọ elu gị. Dkwesiri ịga n'ihu na nyocha nche tupu ikwenye gị ịbanye ụgbọelu. Na ụgbọ oloko CFL, ị ga-anọ ọdụ n'ọdụ ụgbọ erughị 30 Nkeji oge. Mgbe ị tụlere oge ọ ga-ewe gị iji si ọdụ ụgbọ elu gaa etiti obodo ahụ, ị ga-achọpụta na ụgbọ oloko CFL ka mma na usoro nke oge njem zuru ezu.
3) CFL gbaa ụgbọ okporo ígwè dị ọnụ ala ọbụlagodi na ị jiri ha tụnyere tiketi ụgbọ elu. Ọzọkwa, mgbe ị tụlere ebubo niile metụtara ya, CFL gbaa ụgbọ okporo ígwè nwere ọbụna a mma price ndibiat. Na ụgwọ ndị ọzọ dịka ụgwọ akpa ị na-agaghị akwụ ụgwọ n'ụgbọ oloko, njem site CFL kacha mma.
4) Gbọ oloko bu Enyi gburugburu. Tụnyere ụgbọ oloko na ụgbọ elu, ụgbọ oloko na-apụta mgbe niile. Gbọ elu ikuku na-emebi ikuku dị elu site na carbon dị elu ha na-enye. Insgbọ oloko tụnyere mgbe ike gwụrụ Carbon 20x obere karịa ụgbọ elu.
Kedu ihe dị iche na obere oge, na Day tiketi na CFL?
CFL nwere ụdị tiketi dị iche iche maka mmefu ego dị iche iche na oge njem: ma ọ bụ azụmahịa ma ọ bụ oge ezumike. Pụrụ ijide n'aka na otu n'ime ndị a tiketi ga-adị mma n'ihi na gị 1st klas njem gafee Luxembourg on CFL mba ụgbọ oloko.
Short CFL tiketi:
Tiketi dị mkpirikpi dị irè maka klas 1 maka naanị 2 awa site na oge nkwado. Can nwere ike ịga njem na netwọ ụgbọ oloko CFL na-enweghị mgbochi ọ bụla mana tụlee oge ọbịbịa ụgbọ oloko na-aga ebe ọ na-aga, dị ka usoro iheomume si dị. Ọ bụrụ na ị ga-eme njem dị mkpirikpi, ị kwesịrị ị nweta tiketi a. Are gaghị amachaghị otu ụgbọ oloko, ị ga-ahapụ gị ịhọrọ njikọ gị.
NKWO Bọchị Tiketi:
Tiketi CFL Day bụ tiketi tiketi klas 1 ogologo oge, na ha dị irè site na mgbe okwu a ruo 4 m bụ echi. Nwere ike ịzụta tiketi ụgbọ oloko CFL Day site na igwe tiketi, ọfịs tiketi, ma ọ bụ Chekwaa ụgbọ oloko.
Enwere ndenye aha CFL??
njem ọha na eze, gụnyere ọrụ ụgbọ oloko CFL ahọpụtara, n'ime Luxembourg, bụ n'efu. Ya mere, ọ dịghị mkpa maka ndenye aha CFL, belụsọ na ịchọrọ ịga njem klaasị 1. Citizensmụ amaala Luxembourg na-agakarị ókè-ala na France, nwere ike na-enwe a Flexway 1st klas kwa ọnwa ngafe, maka 85 €. Na mgbakwunye, Citizensmụ amaala Luxembourg nwere ike ịnụ ụtọ ọnụego dị ala na tiketi ọnwa kwa Germany. Yabụ ebe ị nwere ike nweta ozi ndị ọzọ gbasara nke a?
– Ihe ntinye ego CFL.
– Na ekwentị ndị ahịa CFL 2489 2489
Ogologo oge ole tupu CFL ahapụ m kwesịrị ịbịa?
O siri ike ikwu nke ọma, ma Save a Train na-adụ ọdụ ka ị rute 30 nkeji oge tupu ọpụpụ gị. Na oge a, ga-enwekwa oge zuru ezu iji zụọ ihe maka ihe ndị ịchọrọ mee ụgbọ oloko gị dị mfe dị ka o kwere mee.
Gịnị bụ usoro ụgbọ oloko CFL?
Luxembourg na Cologne Train Ahịa
Luxembourg na Koblenz Zụọ Ahịa
Kedu ọdụ ndị CFL na-eje ozi?
Stationlọ ọrụ Luxembourg nke CFL dị na Ebe de la Gare nke dị na etiti obodo.
Na Troisvierges, Fgbọ oloko CFL pụọ ma si na ọdụ Troisvierges dị na akara 10, ijikọ obodo Luxembourg na mgbago ugwu nke obodo. Troisvierges bụ ụlọ nke ugwu abụọ kacha elu na Luxembourg.
Fgbọ oloko CFL na-apụ ma rute Nancy obodo na France. CFL ụgbọ oloko pụọ Luxembourg Central ojii na Nancy ọ bụla 1 awa.
Nwere ike ịchọpụta Flanders na Belgium ụgbọ okporo ígwè njem si Luxembourg na Ghent na / ma ọ bụ Brussels. CFL ụgbọ oloko apụ awa ọ bụla si Luxembourg na Belgium si ịtụnanya obodo na maa mma Old Towns na Europe.
Na-enye ohere ka ha dochie bọọdụ CFL insgbọ oloko?
A na-ahapụ igwe kwụ otu ebe na ụgbọ oloko CFL n'efu, ma ọ bụrụhaala na ị na-echekwa ha na oghere ndị emere maka igwe kwụ otu ebe. Nwere ike ịchọta anyịnya igwe ịchekwa oghere site na-acha akwụkwọ ndụ na-akanye na CFL ụzọ.
Childrenmụaka Na-eme njem na Freegbọ oloko CFL?
Ee, kama ọbuná rue 12 afọ. Youngermụaka tọrọ 12 afọ, nwere ike ịga njem n'efu ma ọ bụrụ na onye okenye karịa afọ 12, nwere ezigbo tiketi na kaadị njirimara.
Na-anu ulo na-ekwe na CFL insgbọ oloko?
Ee, CFL hụrụ nkịta dị iche iche na ndị a n'anya 4 ụkwụ ndị mmadụ nwere ụkwụ nwere ike ịga njem na ụgbọ oloko CFL n'efu. Nkịta ga na-edu ndu ma anaghị ekwe ka ịnọdụ n'oche.
Kedu usoro ịbanye na CFL?
Onye ọ bụla njem ga-eweta ezigbo tiketi na kaadị njirimara. Ọ bụrụ na ị funahụrụ ụgbọ oloko gị ma ọ bụ na-eme ọsọ ọsọ, na azughi tiketi na mbu, ị nwere ike ime ya na ụgbọ oloko, site na ndị nnọchi anya CFL.
Kasị arịọ CFL FAQ – Ka m kwesịrị ịtụ oche n'ihu na CFL?
Mba, e nweghị oche ndoputa na CFL mba ma ọ bụ mba ụgbọ oloko, ị na-anọdụ ebe ị nwere ebe nweere onwe ya, ị ga-enwe ebe ọ bụla n'efu ma ọ bụrụ na ị zụrụ tiketi ụgbọ oloko tupu oge eruo.
Enwere internet Wi-Fi na ụgbọ oloko CFL?
Mba. Can nwere ike ịnụ ụtọ Free Wi-Fi internet na họrọ CFL ụgbọ okporo ígwè, ma Wi-Fi adịghị na ụgbọ oloko CFL.
Luxembourg ka Ettelbruck Zụọ Ahịa
Ettelbruck na Ahịa Junglinster
Mersch na Luxembourg Zụọ Ahịa
Clervaux ka Luxembourg Zụọ Ahịa
Ọ bụrụ n’ị gụrụ ebe a, ị maara ihe niile ị chọrọ ịma banyere CFL ụgbọ oloko na-adị njikere ịzụta gị CFL ụgbọ okporo ígwè tiketi maka gị na-abịa njem on Chekwa ụgbọ oloko.
You choro itinye peeji a na saiti gi? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-cfl%2F%0A%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro), Ma ọ bụ ị nwere ike ị jikọtara ọnụ ugbu a na ibe a.